‘थोत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बोकेर हिँडिरहेछौं' - SINDHULI SAUGAT
SINDHULI SAUGAT ARTICLES NEWS UPDATE ‘थोत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बोकेर हिँडिरहेछौं'
‘थोत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बोकेर हिँडिरहेछौं'
सिन्धुली सौगात डटकम प्रकाशित समय 3:10 AM
समाजमा केही वस्तुगत नियम छन् जसले समाजमा राजनीतिक दलको जन्म गराउँछ । जस्तो पश्चिमी युरोपमा सर्वहारा वर्ग देखा नपर्दासम्म र दुईवटा होस्टाइल क्याम्प देखा नपर्दासम्म भौतिकवादमा आधारित रहेर द्वन्द्वात्मक रूपमा समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणको जन्म हुन सक्दैनथ्यो । उत्पादन सम्बन्धमा आएको विकास र परिवर्तनले नै त्यस खालको सामाजिक चेतनाको जन्म दिएको थियो । एकपटक सचेत वर्ग निर्माण गरेपछि सामाजिक आधार फेर्न मद्दत गर्छ । उत्पादनको इतिहाससँगै ज्ञानको पनि इतिहास छ । ज्ञानधाराको एउटा भुल्को दक्षिण एसियामा पनि आयो ।
२००६ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनुको केही वस्तुगत आधार छन् । नेपालको राणा सामन्तवाद र बेलायती साम्राज्यवादबीच गठबन्धन बनेको थियो । हुन त साम्राज्यवाद भनेको पुँजीवादको पनि विकसित अवस्था हो । त्यसको र सामन्तवादको चरित्र मिल्दैन । तर, पुँजीवादले प्रगतिशील चरित्र गुमाइसकेपछि संसारभर सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी तत्वसँग मिलेर आफ्नो शोषण कायम नै राखिरहेको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुने बेलामा सामन्तवादको मालिक फेरिएको थियो । अर्थात् स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबीच जुन सम्बन्ध थियो, त्यसमा खलबल आएको थियो । त्यस्तै पुँजीवादी संरचना पनि बिस्तारै देखा पर्न थाल्दै थियो । जस्तै जुट मिल बनेको थियो । पुँजीवादले आफ्नो प्रगतिशील चरित्र गुमाएकाले नै नेपालजस्तो पछौटे अर्थतन्त्र भएको देशमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको आधार बन्यो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न मोडबाट गएको छ । प्रवृत्तिका आधारमा यसलाई विभिन्न भागमा बाँड्न सकिन्छ— ००६ देखि ०१५ साल, ०१५ पछि ०४६ सम्म, ०४६ पछि ०५२ साल र जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म ।
अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रै ‘जनयुद्ध’ आवश्यक थिएन । त्यसलाई बलात् थोपरियो । त्यसले सुध्रिरहेको अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त पारिदियो भन्ने मत छ । त्यसप्रकारको सोचले कामदार वर्गलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा नि;शस्त्र तुल्याइदिन्छ । बलको प्रयोग जरुरी नै छैन भन्नु इतिहासकै अवमूल्यन हो ।
जनयुद्धले नेपाली समाजलाई एक्स्पोलर गरिदियो । नेपालको हरेक तह र तप्काले आफ्नो उपस्थिति खोज्न थाल्यो । हरेकलाई आफ्नो अस्तित्वको अनुभूति भयो । माओवादी विद्रोहले पहिचान राजनीतिक जन्मायो भन्ने पनि छन् । तर, त्यसो होइन । कम्युनिस्टहरूले पहिचानको राजनीति गर्दैनन्, वर्गको राजनीति गर्छन् । वर्गको विस्तार जाति, क्षेत्र, लिंगको रूपमा भएको हुन्छ । मार्क्सवादी आन्दोलनले त्यसलाई समेट्नुपर्छ । यो अर्थमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ले हलचल ल्याइदियो । नेपालको पाँच हजार वर्षको इतिहासमा यस्तो ठूलो सामाजिक हलचल आएकै थिएन । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।
म यो उपलब्धिलाई सुधारवादमा सीमित गर्न चाहन्नँ । तर, माओवादी युद्धले गहिरो प्रभाव पार्‍यो । यसले सौन्दर्यको प्रतीक नै फेरिदियो । महिलालाई सुन्दरताको क्यानभासबाट निकालेर संघर्षको क्यानभासमा ल्याइदियो । यो भएको ०५२ देखि ०६२ को बीचमा हो । त्यसपछि अहिलेसम्मको समय क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीच संक्रमणको हो ।
ती दिनहरू खेर गएनन् । मुख्य कुरा यसले मानिसहरूमा चेत जन्मायो । अहिले नेताहरूलाई हेरेर क्रान्ति नै गलत थियो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । किनभने नेपालमा राजतन्त्र समाप्त पार्नु, गाउँका शोषकहरूलाई ठीक पार्नु, मौनतामा बाँचिरहेको देशलाई मुखर बनाउनु ठूला उपलब्धि हुन् ।
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा निराशा, अलगाव पैदा भएको छ । कम्युनिस्टहरूमै एक किसिमको लघुताभाषा पैदा भएको छ । यसको मुख्य कारण हो, कम्युनिस्ट पार्टी जसरी सञ्चालन हुनुपथ्र्यो त्यसरी भएनन् । नीतिनिर्माणमा मानिस सहभागी हुन पायो भने मानिसको मस्तिष्क असाध्यै सक्रिय हुन पाउँछ । जस्तै म हाम्रै पार्टीको उदाहरण दिन्छु ।
हिजो युद्धको क्रममा हरेक कार्यकर्ताको केही न केही जिम्मेवारी हुन्थ्यो । उसले सोच्नैपर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । हरेकको मस्तिष्कले काम गरिरहेको हुन्थ्यो । कार्यकर्ता जब नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाउँछ, उसको मस्तिष्क सक्रिय हुन पाउँछ । त्यसले उसलाई आत्मविश्वासी पनि बनाउँछ । नीतिनिर्माणमा सहभागी हुन पाएन भने कार्यकर्ता परनिर्भर हुँदै जान्छ किनभने नेताले त सोचिदिएकै छ । अहिले निर्वाचनमा देखिएको त्यही हो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा भएको त्यही हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त त नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैको सहभागिता हो । सामूहिक निर्णय प्रक्रिया हो । तर, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यो बाटोमा हिँडेनन् । जस्तै— नेपाली काँग्रेस सिद्धान्तच्यूत भयो । उसले आफ्ना समाजवादी नीति छोड्यो । खासगरी ०४६ सालपछि निजीकरणको बाटो समात्यो । पञ्चायती कालका अपराधीलाई कारबाही गर्नुको साटो क्षमादान दिएर पार्टी प्रवेश गरायो । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा एमालेमा पनि काँग्रेसभन्दा अलिकति राम्रो भए हुन्छ भन्ने भयो । त्यसैको सिलसिला माओवादीमा पनि देखियो । काँग्रेस त्यस्तै छ, एमाले त्यस्तै छ भन्ने ठान्यो । नकारात्मक सिक्ने प्रतिस्पर्धा बढ्यो ।
यी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई अपडेट गरेनन् भने आफ्नो क्रान्तीकरण गरेनन् भने काम लाग्दैनन् । माओ भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आंशिक र आवधिक रूपमा आफूलाई भत्काइरहनुपर्छ, पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्छ ।’ तर, हामी त सिंगै बोकेर हिँडिरहेछौं । थोत्रो, पुरानो कम्युनिस्ट पार्टी बोकेर हिँडिरहेछौं । अहिले क्रान्तिको आवश्यकता एकदमै भइसकेको छ । पार्टीहरूको क्रान्तीकरण आवश्यक छ । पार्टीहरूको आंशिक र आवधिक विघटनको प्रक्रिया ढिलो भइसकेको छ ।
क्रान्तिको समयमा क्रान्ति स्वंयले निश्चित तौरतरिका, ढाँचा र नेतृत्व बनाएको हुन्छ । एउटा चरणमा पुगेपछि त्यसले काम गर्दैन । त्यसैले क्रान्तिको क्रान्तीकरण गरिरहनुपर्छ ।
मार्क्सले सिकाएका थिए, कसैको पनि विलक्षणतामा भर नपर । कोही पनि विलक्षण छैन । त्यसैले त इतिहास जनताले बनाउँछन् भनिएको हो । मेरोनिम्ति अरूले सोचिदिन्छ भन्ने गलत हो । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा कार्यकर्ताहरू नेताहरूमा झुन्डिने लहराहरूजस्ता भएका छन् । त्यसलाई सुधार्न मार्क्सवादी आन्दोलनलाई मार्क्सवादी लिकमा ल्याउन जरुरी छ । त्यो मार्क्सवादी लिक भनेको प्रत्येक कार्यकर्ता नीति, निर्माणमा सहभागी हुन पाउने, विचार राख्न पाउने र उसले दिएको सुझावअनुसार नीतिहरू निर्माण हुने बन्दोबस्त हो ।
लेनिनले माथिबाटै पार्टीहरू सञ्चालन हुनुपर्छ भनेका छन् साथसाथै हरेक समिति निर्वाचनबाटै चुनिनुपर्छ भनेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनताको निगरानीमा रहनुपर्छ । त्यसले जनताको दृष्टिकोणमा पनि फेरबदल ल्याउँछ । जस्तो काठमाडौंको मध्यमवर्गले अहिले एकदमै आक्रोश पोख्छ कम्युनिस्टहरूप्रति । उसलाई के लाग्छ भने, कमरेड जाडोमा थरथर काँम्दै आइपुगोस् । एउटा पुरानो ज्याकेट निकालेर उसलाई भिराइदिन पाइयोस्, जुत्ता फाटेको रैछ भनेर एकजोर जुत्ता किनिदिन पाइयोस् । त्यो चिन्तन भएकाले मध्यमवर्गले अहिले बढी आलोचना गरिरहेको छ ।
हामी केही हदसम्म बिग्रियौं, यो साँचो हो । अर्को हामीले गर्न नसकेको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गराउन सकेनौं । हाम्रो देश असाधारण नायकको खोजी गर्ने देश हो । खोला बढेको बेलामा अरूले नसके नि राजाले सक्छ भन्ने चिन्तन थियो । पछि राजाको ठाउँमा नेता आए । राजाजस्तै नेता पनि सुपरम्यान हो भन्ने चिन्तन हावी भयो । जनतामा आफ्नो हिस्सा खोज्ने चिन्तन भएन । अर्को, जनतामा नेताहरू आज पनि हिजो भूमिगत कालमा जस्तै थोत्रेथांग्रे नै हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन भयो । यसले नेतालाई पारदर्शी बन्न दिएन ।
चाहिन्छ राजनीतिक स्वतन्त्रता
कम्युनिस्ट पार्टी आफैं प्रजातन्त्रको सघन विस्तारका लागि जन्मिएको हो । प्रजातन्त्रका दुई आयाम छन्— राजनीतिक र सामाजिक । मार्क्सले देखे, पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा राजनीतिक आयाममात्र छ, सामाजिक छैन । उनले प्रजातन्त्रमा सामाजिकता पनि मिलाऊँ भने । त्यसैले मार्क्सले पूर्ण र सर्वोच्च प्रजातन्त्रको वकालत गरेका हुन् । यता सामाजिक पक्षमा बल दिने नाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपेक्षा गरे । त्यो रुस, चीन जताततै देखा पर्‍यो । त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पनि आइपुग्यो ।
मार्क्सवाद अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो । अनि यसका कमजोरीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छन् । मार्क्समै पनि केही कमजोरी थिए । लेनिन, माओ, स्टालिनमा पनि थिए । उनीहरूको कोही पनि पूर्ण थिएनन् । उनीहरूलाई पूर्ण मानेपछि मार्क्सवादको विज्ञान मर्छ । उनीहरूलाई पूर्ण मानेपछि त सोच्नै बन्द हुन्छ । भट्ट्याइदिए पुग्छ ।
त्यसैले पार्टीहरूको जनतान्त्रिकीकरण चाहिएको छ । राजनीतिक स्वाधीनता हुन्छ भने विमतिहरूलाई स्थान हुन्छ । विमतिलाई ठाउँ दिए मात्र नयाँ विचार जन्मिन्छ । नेतालाई प्रश्न नै नगर्ने भएपछि कसरी नयाँ विचार जन्मिन्छ ? कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्रको राजनीतिक पक्षलाई महत्व दिन सकेनन्, यो नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्न नसकेको मुख्य काम हो, उसले मार्क्सवादमा थप योगदान दिन सकेन । हरेक देशमा पुगेपछि मार्क्सवादमा केही थपको आवश्यकता पर्छ । तर, हामीले नेपालमा मार्क्सवादमा नयाँ योगदान दिन सकेनौं ।
त्यसैले अहिले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य काम मार्क्सवादको विकास हो । दु;खको कुरा, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अध्ययन, अनुसन्धान छैन । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पढ्नेको कदर हुँदैन । संसारभरि नै के देखिएको छ भने जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा छन् त्यहाँ विचारधाराको विकास हुन सकेको छैन । त्यसको एउटा मुख्य कारण हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसंगठनात्मक राजनीतिक स्वाधीनता (लिबर्टी) भएन । त्यस्तै फरक मत स्वीकार्ने पद्दति भएन ।
विडम्बना के हो भने, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारधाराको विकास भइरहेको छ, उनीहरूले लागू गर्ने ठाउँ नै छैन । जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो छन्, जस्तै— नेपाल, भारत, त्यहाँ विचारधाराको विकास नै भएको छैन । किनकि कम्युनिस्टहरू नै स्वतन्त्र छैनन् । मलाई चारजना स्वतन्त्र कम्युनिस्ट बौद्धिक देखाइदिनुस् त ? नेपालमा अहिले कसैको पनि विलक्षणतामा भर नपर्ने सतिसाल जस्ता कार्यकर्ता चाहिएको छ । नेताको आसेपासे हुने लहरा होइन । अन्नपुर्णपोष्ट बाट
कमलामाईले नगर शिक्षा योजना कार्यन्वयन गर्ने
रातमाटा रामेश्वरधाम व्यवस्थापन समितिको तेस्रो अधिव...
मौन अवधिमा मधेशमा यसरी हुन्छ चलखेल
पूर्व क्याम्पस प्रमुख शारदामणी खड्काको श्रीमती सडक...
वहिरा विद्यार्थीहरुलाई सकेको सहयोग गर्छु : खत्री
शनिवारे बजारमा चार गुणा वढी खसी, बोका भित्रीए
रेडक्रसद्वारा सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न
मनसुनी गतिविधि र जलवाष्पयुक्त हावाको कमजोरीले गर्म...
नेपाल मलेसियाविरुद्धको खेलमा १० विकेटले विजयी